Gianvito Rossi brand chaa chaa chaa mara mma nke oke umunwanyi di iche iche gburugburu uwa. Ụdị niile nke onye na-emepụta ihe a bụ ihe dị oke mma, dịka nke ọma dị iche iche.
Akụkọ banyere ika Gianvito Rossi
Gianvito Rossi bụ akara mara mma, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na aha Rossi n'ụwa nke akwa akpụkpọ ụkwụ dị elu amarawo nke ọma ogologo oge. Nke a malitere na 2005 site na Janvito Rossi, nwa nwoke a ma ama bụ onye na-ewu ewu bụ Italian Sergio Rossi. N'oge ahụ, ụlọ ahịa Gucci Group zụtara azụmahịa nke nna ya, Janvito wee ghọta na ọ bụ oge mbụ na ndụ ya na ugbu a ọ naghị emepụta akpụkpọ ụkwụ, ma ọ maghị otú ọ na-achọghị ime ihe ọ bụla ọzọ.
Ọ bụ ezie na Janivito Rossi enwebeghị ahụmahụ na mmepụta nke azụmahịa ya, ọ nwere ihe ọmụma na nkà dị mkpa maka ịkpụzi na ịmepụta akpụkpọ ụkwụ. Ọ bụ ya mere ika ahụ, bụ nke o nyere aha ya, ọ bụghị naanị na ọ dị mfe ịba ụwa, ma ọ bụ karịa ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ahụ nna ya wuru na 1950.
Ụdị ejiji Gianvito Rossi
Onye nchoputa na onye nduzi ihe okike nke ika a na-elebara anya umu nwanyi. Ụdị ụdị dịgasị iche iche maka ụmụ nwanyị, na-enye ndị inyom mara mma n'ọnọdụ nile ka ha bụrụ ndị nwere mma, ndị inyom na ndị mara mma:
Ya mere, na nchịkọta Gianvito Rossi akwa akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ dị iche iche, nke dị iche na nke dị elu nke buut, kamakwa na njikọta nke njirija na ọdịdị nke ikiri ụkwụ, silhouette na ihe dị iche iche ihe ịchọ mma. A na-eji ọtụtụ ndị na-eme ka ọkpụkpụ calfskin ma ọ bụ nke na-edozi ahụ, ka akpụkpọ ụkwụ ndị a nwee ike ịdị jụụ na ihu igwe ọ bụla;
Gianvito Rossi na-eme ihe site na iji "Rossi pads" a ma ama, n'ihi ya, ha dị ezigbo mma. Ka ọ dị ugbu a, n'adịghị ka ụdị ndị ahụ Sergio Rossi na-eme, ihe ndị a na-emepụta n'okpuru nduzi nke Janvito na-eji ọmarịcha ihe eji achọ mma. N'ime okike akpụkpọ ụkwụ nke onye ọrụ a, akụkụ ọla, ụdị larịị dị iche iche, ọmarịcha ọkpọ ndị na-egbuke egbuke na-ejikarị arụ ọrụ;
akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ Gianvito Rossi, e mere maka ịbanye n'ìhè ahụ, na-enwekarị ọwụwa ụkwụ dị elu site na 9 ruo 13 cm. N'etiti ụdị ndị a na-eyi kwa ụbọchị, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ na-achịkwa ikiri ụkwụ. Ụdị akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ bụ nnukwu - na nchịkọta nke ika ahụ, akpụkpọ ụkwụ na akpụkpọ ụkwụ dị iche iche dị iche iche na-acha uhie uhie ma na-acha uhie uhie ka nwa amaala. Ihe kachasị ewu ewu n'àgwà a bụ akpụkpọ ụkwụ Gianvito Rossi Portofino, nke, site na ntinye aka ya, na-asọpụrụ Kim Kardashian;
A na-eji akpụkpọ ụkwụ ballet na Gianvito Rossi mee ka ọ bụrụ na a na-eji akpụkpọ ụkwụ. Na mmepụta ha naanị ihe ndị dị elu na-eji ya eme ihe, ya mere ụdị akpụkpọ ụkwụ dị otú ahụ adịghị eweta nkasi obi ọbụlagodi n'ụdị sọks ogologo. N'agbanyeghi n'emebeghi ihe eji eme ihe n'emeghi ka ha di iche iche, ha na-ejuputa ihe kacha mma nke ahihia di iche iche, di ka uwe ugbua.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị dị na Gianvito Rossi bụ maka ndị inyom mara mma, e nwekwara ụmụ nwoke na-agbanye akara nke akara a. Onye ngosi a ma ama na-enye ọtụtụ ọdịiche nke akpụkpọ ụkwụ dị mma, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na moccasins maka ndị nnọchianya nke oke ọhaneze.
N'ikpeazụ, Gianvito Rossi, dị ka ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ, nwere akara dị iche maka mmepụta ngwa. Akpa nke ezigbo akpụkpọ anụ na-enye onye nwe ya ụdị pụrụ iche na ịdị mma ma kwado oyiyi ya, na-emecha ya.
N'ezie, ngwaahịa mbụ nke ika Gianvito Rossi nwere ike imeli ọ bụghị onye ọ bụla fashionista, n'ihi na ụfọdụ n'ime ha bụ naanị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Ka ọ dị ugbu a, taa n'ọtụtụ ntanetị ịntanetị, ị nwere ike ịzụta ihe ndị mara mma nke Gianvito Rossi, nke fọrọ nke nta ka ọ dị ka ọdịdị nke akpụkpọ ụkwụ "ezigbo".
Ụdị ihe a ga-eme ka ndị ọzọ chee echiche, Otú ọ dị, ọ dịghị nkwa na ọ ga-abụ na ọ dịka Gianvito maka àgwà na nkasi obi nke sọks.
Images maka okpomọkụ nke 2014
Ejiji ejiji na pompon
Nails Ejiji 2015
Akpụkpọ ụkwụ ejiji - mgbụsị akwụkwọ 2016
Akpa Nwanyi 2015
Ejiji Wedding - Ụdị 2015
Uwe Akara Akara 2013
Ụdị ejiji kachasị ọhụrụ 2014
Ebube anam-elu - mmiri-okpomọkụ 2014
Uwe mkpuchi 2015
Hallway Provence - ihe nzuzo nke nkasi obi obibi
Nkwenye siri ike maka ego
Nwa nke Mark Zuckerberg ghọrọ onye nwere mmasị na "Star Wars"
Steamer-blender maka nri nwa
Omenala na-achịkwa ọdụ ụgbọelu
Ulo mgbede ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2017-2018 - ụdị kachasị mma nke oge ọhụrụ
Osetian pies: uzommeputa
Ekike ejiji ejiji 2014
Gịnị kpatara nrọ nke milking ehi?
Kedu esi agba akwa akwụkwọ?
Nwa obere nwanne Britney Spears: "Enwere m ime mgbe m dị afọ 16, ọ bụ ihe ijuanya!"
Evan Peters na enyi nwanyị ya
Mgbe ntutu nwa na - ada ike - gini ka ime?
T-shirts mara mma - ụdị kachasị mma na ihe ị ga-eyi?
Kedu ka esi eme bupon maka gynecology?
Esi ewepu abuba site na afo na akuku?
Mgba nke ntutu - niile nhọrọ maka edozi edozi